Indlela yokwabelana ngokuzenzekelayo ngeZithuba zakho zeWordPress kwiLinkedIn usebenzisa iZapier | Martech Zone
Esinye sezixhobo zam endizithandayo zokulinganisa kunye nokupapasha ukutya kwam kwe-RSS okanye iipodcast zam kumajelo asekuhlaleni Isongezelelo. Ngelishwa, iqonga alinalo ukuhlanganiswa kwe-LinkedIn, nangona kunjalo. Ndizame ukubona ukuba bazakongeza na kwaye babonelela ngesinye isisombululo- ukupapasha kwi-LinkedIn nge Zapier.
Iplagi yeZapier WordPress kwi-LinkedIn
I-Zapier isimahla kwindibaniselwano yokudibanisa kunye neziganeko ezilikhulu, ke ndingasisebenzisa esi sisombululo ngaphandle kokuchitha imali kuso… nangcono! Nantsi indlela yokuqala:
Yongeza uMsebenzisi weWordPress -Ndicebisa ukongeza umsebenzisi kwiWordPress yeZapier kunye nokuseta iphasiwedi ethile. Ngale ndlela, awunakukhathazeka ngokutshintsha iphasiwedi yakho.
Faka iPlagi yeWordPress yeZapier - I Iplagi yeZapier WordPress ikuvumela ukuba udibanise umxholo wakho weWindowsPress kwiitoni zeenkonzo ezahlukeneyo. Yongeza igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha elimiselweyo kwiZapier.
Yongeza iWindowsPress kwi-LinkedIn Zap - I Zapier Unxibelelaniso iphepha linenani lokudityaniswa esele lidwelisiwe… enye yazo yi-WordPress ukuya kwi-Linkedin.
I-Zapier WordPress kwiTemplate ye-LinkedIn
Ngena kwi-LinkedIn -Uya kucelwa ukuba ungene kwi-LinkedIn kwaye unikezele ngeemvume zokudityaniswa. Nje ukuba wenze, iZap ixhunyiwe.
Layita iZap yakho -Nika amandla i-Zap yakho kunye nexesha elizayo xa upapasha iposti kwi-WordPress, iya kwabelwana ngayo kwi-Linkedin! Ngoku uza kuyibona iZap isebenza kwiDashboard yakho yeZapier.
Kwaye apho uya khona! Ngoku, xa upapasha iposti yakho kwiWordPress, iya kupapashwa ngokuzenzekelayo kwi-LinkedIn.
Owu ... kwaye ngoku ndipapasha apho, mhlawumbi ungathanda ukundilandela kwi-LinkedIn!
landela Douglas Karr Kwi-LinkedIn
tags: feed kwi-linkinLinkedInlinkin ukupapashapapasha i-wordpress kwi-linkinrss kwi-linkinukupapashwa kwimidiya yoluntuWordPressiplagi yamagamaI-wordpress kwi-linkinI-WordPress kwi-linkin zapzapperIplagi yamagama e-zapier